New foldable Motorola Razr 5G smartphone: anyị na-ewetara gị ya! | Gam akporosis
Motorola Razr 5G, ekwentị mpịachi ọhụụ malitere maka ihe dị ka euro 1.500
Emeela Motorola Razr 5G ọhụrụ. Nke a na-abịa dị ka mpịachi ọnụ na-ọkọnọ dị ka nke ukwuu dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ Samsung Galaxy Fold2, ọzọ mpịachi ama na-ọkọnọ ihe karịrị otu ọnwa gara aga na nwere a set price nke banyere 2.000 euro.
Ebumnuche Motorola a chọrọ ka ọ daba na ndị na-ege ntị dị ntakịrị, ebe o nwere obere nhazi chipset na nkọwapụta teknụzụ dị ala, mana nke a nwere mmetụta dị mma na ọnụahịa ya, nke bụ ihe dị ka euro 500 dị ọnụ ala karịa ọnụahịa a kpọtụrụ aha nke South Korea ika.
1 Njirimara na njirimara teknụzụ nke Motorola Razr 5G
Njirimara na njirimara teknụzụ nke Motorola Razr 5G
Ihe mbụ anyị mere ka anyị mata banyere ama dị oke ọnụ bụ atụmatụ ya, nke a na-ele ya anya dị anya site na Galaxy Fold2 ahụ a kpọtụrụ aha, yana Huawei Mate X, ekwentị mkpanaka ọzọ na-arụ ọrụ foldable. N'ebe a, anyị nwere ogige kwụ ọtọ nke na-echetara anyị ụfọdụ ụdị ochie nke ika ahụ.
Obere, ọkụ na kọmpat
Ihuenyo nke mobile, nke dị n'ime ogige ahụ, nwere diagonal 6.2-inch na ọ bụ teknụzụ P-OLED. Nke a nwere mkpebi nke pikselụ 876 x 2.142 na njupụta nke 373 dpi, ebe nke abụọ, nke bụ nke egosipụtara na mpụga, bụ G-OLED ma tụọ sentimita 2.7, na mgbakwunye na ịmepụta obere mkpebi nke 800 x 600 pikselụ ma na-etu ọnụ maka pikselụ nke 370 dpi.
Chipset processor nke Motorola Razr 5G bu Qualcomm si Snapdragon 765G nwere nkwado maka njikọta 5G yana Adreno 620 GPU. Ejikọtara SoC a na 8GB RAM na 256GB ohere nchekwa dị n'ime, iji nyefee ya na nhazi nchekwa. Batrị ahụ, maka akụkụ ya, nwere ikike nke 2.800 mAh ma dakọtara na teknụzụ ngwa ngwa 15 W; ebe a anyị gaara ahọrọ batrị ma ọ dịkarịa ala ikike 4.000 mAh, dị ka ọnụ ọgụgụ ọzọ a kpọtụrụ aha dị ụkọ taa.
Igwefoto n'ihu nke ngwaọrụ ahụ bụ 20 MP ma nwee oghere oyiyi nke f / 2.2. The n'azụ modul bụ sọrọ na mejupụtara a 48 MP isi ihe mmetụta na f / 1.7 aperture na a ToF 3D akpali.
Motorola Razr 5G na - achụpụ mmiri naanị, mana ọ naghị eguzogide mmiri mmiri
Ndị ọzọ teknuzu atụmatụ na nkọwa gụnyere ojiji nke a n'akụkụ akara mkpisiaka mmetụta na mmiri na-eguzogide (splas) nke na-eji ihe mkpuchi na akụkụ niile nke ekwentị, gụnyere mgbatị ya. Tụkwasị na nke ahụ, Motorola Razr 5G na-abịa na Bluetooth 5.0, ọdụ ụgbọ USB-C, Android 10 dị ka sistemụ arụmọrụ na nhazi ụlọ ọrụ ole na ole, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / a, akụkụ nke 168.5 x 72.5 x 8mm na a arọ nke 190 nke bụ nnọọ ala na aka.
IKIRU Isi ime ụlọ: 3.2 anụ ọhịa P-OLED / N'azụ nke abụọ: 2.7-anụ ọhịa G-OLED
Nhazi Qualcomm si Snapdragon 765G nke nwere isi asatọ na 2.4 GHz max.
Ohere TERLỌ N'IME 256 GB
Gbanwee CAMERA Abụọ 48 MP + ToF
CAMERA N'IHU 20 MP
UMUAKA 2.800 mAh na 15 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa
Njikọ Wi-Fi 802 ac / Bluetooth 5.0 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / 5G
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ na akụkụ / Ihu ude / USB-C / ikwommiri eguzogide / sọrọ SIM / 4 okwu iji belata ihere mkpọtụ n'oge oku
Mbibi na ibu ibu 162.6 x 75.9 x 8.8 mm na 206 g
Ekwupụtawo mobile maka Europe, ya mere Spain dị njikere ịnata ya n'oge na-adịghị anya, yana ụwa ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya karịa. Nke a enwebeghị ụbọchị ntọhapụ, mana anyị chere na ụbọchị ole ma ole ma ọ bụ izu na-esote anyị ga-amata ya maka mpaghara ọ bụla.
Ọnụahịa ire ere nke Motorola Razr 5G bụ euro 1.499 maka Europe. Nke a nwere ike gbanwee ntakịrị na ụfọdụ ahịa na ntanetị ahịa, mana ihe doro anya bụ na ọ ga-ebelata oge, nke bụ ihe na-eme na ekwentị niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Motorola Razr 5G, ekwentị mpịachi ọhụụ malitere maka ihe dị ka euro 1.500
Ajax, nyocha nke sistemụ nchekwa ikuku kachasị ngwa iji mejuputa
Esi rụọ ọrụ ọnọdụ ịgbachi nkịtị na Facebook